Chipper Bruks - Kinne Maskinteknik AB
Chipper weyn Mill
Qoryaha qajaarka loo yaqaan Bruks 1701
Chipper alwaaxani waa mashiin qaas ah oo loogu talagalay soo saarista qaybo waaweyn oo ka mid ah wax soo saarka dhuxusha lagu dubto ama hilibka loo isticmaalo sidii wax loo dhimayo inta lagu jiro soosaarka biraha. Chipsyada ayaa markaa beddeli doona coke habka. Cabbirka chip-ga waa la hagaajin karaa inta u dhaxaysa dhererka 50-150 mm. Hagaajinta waxaa lagu sameeyaa adoo dhaqaajinaya goynta goynta sare ama hoos.
Dhirtu waxaa lagu dhejiyay 12 m steel steel si loo fududeeyo gaadiidka. Warshad sidoo kale miiska quudinta quudinta hal kayd loo adeegsaday. Sidoo kale xamuul gooni ah Long Jon loo soo saaray warshadda.